Aw-Libaax iyo Wafti la socda oo ka degay magaalada Kismaayo. - Caasimada Online
Home Warar Aw-Libaax iyo Wafti la socda oo ka degay magaalada Kismaayo.
Aw-Libaax iyo Wafti la socda oo ka degay magaalada Kismaayo.
Wararka naga soo garaya Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada hoose ayaa waxaay tibaxayaan in manta magaaladaasi uu ka soo dagay Wafdi balaraan oo uu hogaaminayo gudomiyaha Maamul usameynta Gobolada Jubboyinka iyo Gedo Sh.Maxamed Maxamuud Yusuf.
Wafdigaan ayaa waxaay saaka ka dhoofeen magaalada Nairobi ee Xarunta Wadanka Kenya waxaayna ka kobnayeen 8 xubnood oo iskugu jira Gudiga Farsamada iyo waliba saxiixeyaasha Qorshaha Nabad ee Jubbaland xubnaha aan magacyadooda helnay ee wafdigaan ku jira ayaa waxaa ka mid ah Muqtar Sahal Muqtaar dheere iyo Cabdicasiis.
Wafdigaan ayaa waxa si heer sare ah lagu soo dhaweyay Garoonka Magaalada Kismaayo halkaas oo la arkayay dadweyne Caleemo qoyaan ku soo dhaweynaya wafdigaan.
So dhaweynta wafdigaan waxaa qayb weyn ka qatay Maamulka kmg ah ee Magaalada Kismaayo iyo Guud ahaan Shacabka Magaalada Kismaayo.
Xubnaha wafdigaan oo ah kuwa sida rasmiga ah gacanta ugula jira Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo ayaa waxa lagu wada in ay xaliyaan madmadow soo kala dhexgalay beelaha dagan Gobolada Jubboyinka iyo Gedo oo ku saabsan kala aragti duwanan ka jirta dhismaha Maamulka iyo isku dheelitirka Ciidamada ka howlgala Magaalada Kismaayo.
Dhanka kale Socdaal wafdigaan ay ku yimadeen magaalada Kismaayo ayaa ah mid qadanayo mudo waxaana xubnahaan hor yaala howl culus oo ay ugu horeyso .
Xalinta Khilafadka Jira
Casumida Ergoyinka shirka ka qayb galaya
Diyaarinta qorshaha uu shirka ku soconaayo
Furida Shirweynaha Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo
qabashada Doorashada Madaxweynaha Jubbaland iyo Arimo kale oo badan waxaana arimahaasi oo dhan ay noqonayaan kuwa howl badan ay ka so keeyso.
Ugu danbeyn Shacabka Magaalada Kismaayo ee qaybta ka qatay so dhaweynta Masuliyintaani ayaa waxaay rajo weyn ka mujiyeen Dhismaha Maamul Goboleedka Jubbaland Staet ee lagu wado in ay ku midobaan Gobolada Jubbada hoose Jubbada dhexe iyo Gedo.